बिहानै कोरियन लाहुरे र अमेरिकन लाउरेसँगको टेलिफोन कुराकानीले खलबलियो मेरो निद्रा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सौल कोरिया । शनिवार बिदा बिहान १० बजेसम्म सुत्छु भन्ने सोचाई थियो। शुक्रवार बेलुका कम्पनीले कामदारहरुलाई पार्टी दिएको थियो । पार्टी खाएर साथीसँग सुख दुखको कुरा गर्दै रातिको २ बजेसम्म बसे । त्यसपछि बल्ल सुतेको थिए।
एक्क बिहान ६ बजे नै रूम पार्टनरको फेसबुक मेसेन्जरमा चर्को आवाजमा टुरुङ्ग टुरूङ्ग गर्दै घन्टी बज्यो । त्यसपछि मेरो निन्दा खलबली हाल्यो, आँखा पोल्छ निदाउन खोज्छु साथीको मोबाइलमा आउट साउन्ट गरेर चर्को आवाजले बोलिरहेको हुँदा निदाउन सकेपो ।
साइनोले दुई जनाबीच मामा भान्जा नाता पर्ने रहेछ । कोरियामा रहेका मामा र अमेरिकामा रहेका भान्जा दुई बीच हेल्लो मामा जय मासी, सन्चै हुनु हुन्छ ?
अंह भान्जा सन्चै छ मलाई । घर तिर माईजुलाई फोन गरेको थिए भान्जा अमेरिका पुग्यो रे खुशी लाग्यो। अनि कति दिनमा पुग्यो ? अहिले काम के गर्नु हुन्छ नि ? अहिले काम ठिकै छ मामा सुरुमा टेक्ससमा नेपालीको रेष्टुरेण्ट १२ डलर प्रति घण्टामा काम गरे बसे ६ महिना त्यस पछि अहिले चाही वेस्ट वर्जेनिया मा क्यानिडियनको पसल मा १४ डलर प्रति घण्टा काम गर्दै छु।
आउन दुई महिना लाग्यो। ए होर भान्जा ? मेरो पनि कोरियाको भिसा एक वर्षा जति छ त्यस पछि नेपाल गएर छोरा छोरी को उज्वल भबिष्यको लागि अमेरिका तिर आउकि भनेर सोच्दै छु भान्जा । मामा जान कति जति खर्च हुने रहेछ ? भान्जाको कति खर्च भयो ?
भान्जाः म आउँदा ४७ लाख जति लाग्यो तर यति नै खर्च लाग्छ भन्न अलि गारो छ। यहाँ मेरो रूम पार्टनर साथीको ७० लाखसम्म खर्च गरेर बल्ल पुगेको छ ।
मामाः के कति लाग्छ भन्नु दलाल हेरी हेरी फरक पर्छ।
भान्जा: जाँदा कहाँ कुन कुन देशको बाटो हुदै जानु भयो ? कति को गाह्रो छ म आउन सक्छु होला र ?
भान्जाः म आउदा त भारत हुदै थाईलेन्ड, कोलम्बिया, पानामा, हुंदै बिचमा अरु ३ देश पार गरेर मेक्सिको पुगे ।
मेक्सिकोमा दुई दिन बोर्डर तर्ने तालिम लिए त्यस पछि बल्ल मेक्सिको र अमेरिका सिमाना पार गरे।
बाटोमा धेरै दुख पाईयो मामा जंगलमा पैदल हिड्ने देखि भोक भोकै फोहोर पनि पिएर बेखर्ची भएर कति दिन जंगलमै बास बसे कुरै नगरु हो ।
मामा : गाह्रो छ । तर त्यो सबै जोखिम मोल्न तयार भए आउन सकिन्छ। ए होर । अनि अहिलेको राष्ट्रपति डोनल्स ट्रामले अबैधानीक विदेशी आउन नदिने भनेर बोर्डरमा हजारौ सेना परिचालन गरेको छ भन्ने खबर अनलाईन समाचार तिर देख्छु नि । मामा पनि हाहा हाँस्दै भान्जाले भने अहिलेसम्म नेपालीहरु आउन चाहनेहरुलाई कसैले रोक्न सक्या छैन अमेरिकन विदेश नितीले सम्म जसरि भए पनि यहाँ नेपाली आईरहेको छ।
मलाई बोर्डर काटेपछि दुई दिन केरकार गर्यो अनि खुट्टामा जीपिएस बाँधेर ६ महिनामा बल्ल एक हप्ता अगाडी खोलेको हो।
मामाः ए होर ।
भान्जाः आज हजुर लाई एउटा सल्ला गरौ कि भनेर सम्झेको ।
मामा : के कुरा हो भनन भान्जा। म अमेरिका आउँदा तीन प्रतिशत ब्याजमा सपाट लिएको पैसा ब्याज बढेर धेरै भएको छ यहाँ अहिले सेटेल हुन कागज पत्र मिलाउन वकिल फि तिर्न कोठा भाडा सबै गर्दा अलि गाह्रो भयो पैसा भए ४ लाख जति सापट दिनु होला मामा पछि फेरी मेरो बिना ब्याज जति चलाए नि हुन्छ क्या मामा कुरा बुझ्नु भयो नि ? हुन त हो भान्जा मेरो पानी बजार मा घर बनाउदै छु अहिले मलाई नै पैसा खाँचो छ अहिले लाई सकिन्न होला भान्जा ।
भान्जा : कोशिस गर्नु पर्यो मामा । ए हुन्छ म साथी हरु सँग कुरा बुझ्छु ।
मामाः हस। अब तिहार नजिकै आई सक्यो अमेरिकामा झन् नेपालि धेरै छन् रमाइलो होला नि ?
भान्जाः खै मामा जति सुकै महँगो लुगा लगाए पनि मिठो खाएर चिल्लो गाडी चढे नि नेपाल को चाड पर्व आउँदा त मन नरमाईलो हुन्छ के गर्नु आफ्नै गाँउ घर साथी संगी आफन्त इष्टमित्र को सम्झना बढी आउँदो रहेछ भन्दै मलिलो स्वरमा हुन्छ। मामा लामो समय पछि कुराकानी भयो खुशी लाग्यो फेरी फोन गर्दै गरौला नि अहिले लाई बाई ।
जयमासी भन्दै दुई जना बिचको संवाद सकियो। त्यस पछि म पनि उठे कफि पिए मन मनै लाग्यो के सबै नेपाली अमेरिका मात्र जान चाहन्छ गएको हरु को हालत खासै सन्तोसजनक छैन रहेछ अन्य नेपाली हरु अमेरिका अबैधानिक रुपमा जाने तयारीमा रहेकाहरु को लागि केहि जानकारी हुन सक्छ भन्ने आशयले यो खबर लेखेको हो ।